#7/3 #update #IMAGES #ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီ. #MYANMAR #POLICE #CRACKDOWN #RANGOON #STUDENTS | democracy for burma
#7/3 #update #IMAGES #ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီ. #MYANMAR #POLICE #CRACKDOWN #RANGOON #STUDENTS
tags: 6/3/, 88 generation, ABFSU CW, arrested, ကိုရဲမျိုးဆွေ - ဒဂုံ, စိတ်မကောင်းဘူး, ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း ။, ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီ, ကျောက်ဆည်, Burma, CLIP, Crackdown, Hledan Protest March, Ko Ko Gyi, Letpadan, Myanmar, NILAR THEIN, plainclothes, Police, Press conference, Rangoon, released, students, THUGS, Violence
ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်မှုများကို အန်တုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီး ပင်မသပိတ်စခန်းသို့ ပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ ဗကသ ရဲဘော် ၅ ဦး
cr.Nat Shin Naung
photocredit Hlaing Bwa
photocredit Htut Ko Ko
Zin Wyne ဘယ်ကောင့်မှ လူမထင်ဘူး =================== ရဟန်းသော..သံဃာသော အသက်ကြီးသော…ငယ်သော ယောက်ျားသော..မိန်းမသော ခလေးသော..လူကြီးသော… ဘယ်ကောင့်မှလူမထင်ဘူး…. ပါးဆွဲရိုက်ပြစ်လိုက်မယ်.. ဆောင့်ကန်ချိုးပြစ်လိုက်မယ်… စောက်ခွက်ဆွဲထိုးပြစ်လိုက်မယ်… နရင်းဖြတ်ရိုက်ပြစ်လိုက်မယ်.. အဘတို့ပေးထားတဲ့… (တာဝန်)ကွ..ဘာထင်လဲ…..။ ————————- တောက်…ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကြည့်ရတာတောင် ကျက်သရေတုန်းပါ့ကွာ…။ 6.MARCH 2015 လှည်းတန်းစပြီ CR.PO PO MANDALAY မန္တလးလည်းစပီ (4:30)(6-3-2015) မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရှေ့ photo-Soe Hein
Police and plainclothes men arrest five student demonstrators and attempt to detainaphotojournalist ataprotest in Letpadan- ABFSU CWC arrested boycott not released yet. လက်ပံတန်းတွင် ၆. ၅. ၁၅ နံနက်က ထိမ်းသိမ်းခံရသူ ၅ဦး ၊ ၆. ၃. ၁၅ နေ့ ညနေ ၅း၀၅ နာရီထိ စစ်ကြောင်း သို့ ပြန်မရောက်သေး (မလွတ်သေး) ပါ။ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး Police in Mandalay charged three activists who joined local students protesting against the crackdown in Letpadan on March 3. The three activists, Aye Thein, Amar Ni and Tin Mar Yi, were charged under Section 18 and Section 505 (b) at the No-2 police station in Aungmyethazan Township. Police and plainclothes men arrest five student demonstrators ataprotest in Letpadan today.(6/3/)
update 6/3/ Police cracked down on student protesters opposing Myanmar’s new education law Friday ယနေ့နံနက်ဆယ်နာရီခန့် ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းမှ ကိုရဲမျိုးဆွေ – ဒဂုံ ကိုရဲရင့်ပိုင်မှူး – ကျောက်ဆည် ကိုသာအေး – ကျောက်ဆည် ကိုအောင်မင်းခန့် – ကျောက်ဆည် မအိသဉ္ဇာမောင် – ရတနာပုံ တို့ငါဦးအား လက်ပံတန်းမြို့ထဲတွင် လူထုစည်းရုံးရေးလုပ်နေစဉ် အရပ်ဝတ်များနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့များက အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။ photcr.zaw sai arrested arrested persons yangon released – အာဏာရှင်တွေကလိုအပ်ရင်ထောင်ကထုတ်ပြီး ကျောင်းသားပြည်သူကိုသတ်ဖို့ခိုင်းတဲ့သူ တွေလည်ပင်းညှစ်ခံရတဲ့ကျောင်းသူလေး မတင်မေကျော်ပါ ဒီဖက်က မနီလာက ကလေး တွေ ကို သူ ကိုယ် နဲ့ အုပ်ပြီးအရိုတ် ခံ တယ် KO KO GYI 88 GENERATION STUDENTS :” Those who committed violence need to be identified very quick . ` ကနေ့ဖြစ်စဉ်မှာ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သော သူများအားအမြန်ဆုံးဖေါ်ထုတ် အရေးယူပေးဖို့ လိုအပ်တယ် ပြီးတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေ ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ် ဒီလိုဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ကိုအပြင်းအထန်ရှုပ်ချတယ်´ ကိုကိုကြီး ၈၈ငြိမ်းပွင့်
WHO IS RESPONSIBLE FOR THE PLAINCLOTH VIOLENT POWER- Such plainclothes power by violent crack-down isaviolation of the law and the constitution, as the government’s violence. Police launchedacrackdown on about 200 students and activists, includingawell-known women’s rights defender, NILAR THEIN , who were stagingaprotest in downtown Rangoon on Thursday afternoon. The demonstration near City Hall was held to protest an ongoing police blockade of students in Letpadan. Students News: Updated5March : 4:50 PM ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မစစ်ကြောင်း တားဆီးခံထားရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် တတိယမြောက်နေ့အဖြစ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် ကျောင်းသားအချို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်လက်ပတ် ၀တ်ဆင်ထားသည့် အရပ်ဝတ်များက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်း၍ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်း ခံရသူများတွင် ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်း/ပွင့် မှ မနီလာသိန်း အပါအ၀င် ကျောင်းသား ရှစ်ဦးခန့် ပါဝင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမရှေ့တွင် လုံခြုံရေးယူထားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။ PHOTCREDIT ELEVEN MEDIA Students News: Updated5March : 4:25 PM လက်ပံတန်းမြို့တွင် ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မကျောင်းသားသပိတ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တားဆီးထားခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခြင်း မပြုလုပ်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကျောင်းသားများမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် တတိယနေ့အဖြစ် ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်လက်ပတ် ၀တ်ဆင်ထားသည့် အရပ်ဝတ်များက ဆန္ဒပြနေသည့် ကျောင်းသားများအနီးတွင် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။ Htay Tint ဗဟိုအစိုးရ သိစေချင်ပါသည် ။ နိုင်မယ်လို့ ထင်တုံးက ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာမဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဘယ်သူ တာဝန်ယူမှာလဲ ။ Students and activists have been arrested duringaviolent crackdown againstaprotest near the Yangon City Hall.An official from Kyauktadar Township of Yangon announcedawarning over the loudspeaker at around 3:30pm in front of Mahabanduhla Park in the city, against the protest even before it took place. At around 4pm, about 50 students and more than 60 supporters gathered in front of the city hall, demanding authorities not to use force on the main boycott student column and showing their support for the main column being blocked in Letpadan from marching into Yangon. More than 300 men wearing civilian clothes with red armbands saying “Duty” and over 500 police started surrounding the protestors. The protestors were sent scattering after they were set upon firstly by men wearing civilian clothes with red armbands who attacked the group with batons and later by uniformed police officers, according to witnesses and campaigners. “Men wearing civilian clothes with red armbands started attacking the protestors. They looked very rude. Before the attack, reporters asked them who are they and what their duties here are. They replied rudely to the reporters that those are none of you business. They even attacked girls. A girl was forcedly taken,” saidawitness. “I was very frightened to see the beating. It’s as if it’sabacksliding effort of the government,” saidafemale witness. Police arrested three ’88 Generation members and five students. “Students arrested are Zin Min Phyo, Hein Htet Aung and Zaw Linn Htut. Nilar Thein, Nu NU Aung and Myo Thant from the 88 Generation as well as two others are also arrested
from → Burma, CRACKDOWN, MYAMAR, STUDENTS
← !! #ကျောင်းသားတွေကို #Hijack လုပ်ပြီး လွှတ်တော်ကို #Challenge လုပ်လိုက်တဲ့ #NNER
#Hmuu #Zaw #လူစုလူဝေး #ဖြိုခွင်းရာတွင် ကျင့်သုံးနိုင်သည့် #ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၇ နှင့် ပုဒ်မ ၁၂၈ →